Wasaaradda Arrimaha Debedda Somalia oo beenisay wararka sheegaya inay kulmayaan Madaxwaynahayaasha Somlia iyo Kenya • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Wasaaradda Arrimaha Debedda Somalia oo beenisay wararka sheegaya inay kulmayaan Madaxwaynahayaasha Somlia iyo Kenya
Muqdisho (OWN) – Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad ayaa ka hadlay shir la sheegay inuu dhex mari doono Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Kenya,
kaas oo uu gadhwadeen ka yahay Ra’iisul wasaaraha dalka Itboobiya.Dr Abbiy Ahmed Cali.
Cawad oo la hadlayay laanta Afka Soomaaliga ah ee BBC-da ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay kulankaasi oo si aad ah ay hadal Hayntiisu ugu badatay Warbaahinta.
Wasiir Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay inuusan jirin wax kulan ah oo U qosheysan Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo), kaas oo uu la yeelanayo dhiggiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta.
Kulankan oo si aad ah loo hadal hayay ayaa wararku waxa ay sheegayeen inuu ka dhacayo magaalada Addis Ababa ee Caasimadda dalka Itoobiya,
balse wasiir Cawad ayaa tilmaamay in wasaaraddiisu ay qaabilsantahay arrimaha dibadda, islamarkaana warkaasi uu yahay mid Been abuur ah.
Dhinaca kale Wargeysyada ,The Nation iyo the East African, ee kasoo baxat Dalka Kenya ayaa shalay sheegay in Itoobiya ay wafdi u kala dirtay Kenya iyo Soomaaliya si xal loogu helo muran badeedka u dhexeeya labada dal.